Ubuntu Bata OTA-11 inosvika pamwe nekuvandudzwa kweye-skrini keyboard uye nezvimwe | Kubva kuLinux
Ubuntu Bata OTA-11 inosvika pamwe nekuvandudzwa kweye-skrini keyboard uye nezvimwe
Iyo UBports chirongwa, iyo yakatora kutonga kweiyo kuvandudzwa kweiyo Ubuntu Kubata nharembozha mushure meCanonical kuparadzaniswa nzira nayo, yakaburitsa vhezheni itsva yeUbuntu Kubata OTA-11. Iyo yekuvandudza yakagadzirwa yeOnePlus One, Fairphone 2, Nexus 4, Nexus 5, Nexus 7 2013, Meizu MX4 / PRO 5, Bq Aquaris E5 / E4.5 / M10 mafoni. Iyo projekiti zvakare inogadzira yekuyedza Unity 8 desktop port, inowanikwa muUbuntu shanduro 16.04 uye 18.04.
Kuburitswa kwakavakirwa paUbuntu 16.04 (Iyo OTA-3 kuvaka yaive yakavakirwa paUbuntu 15.04, uye kubva kuOTA-4, iyo shanduko kuenda kuUbuntu 16.04 yakaitwa). Sezvakamboita vhezheni yapfuura, iko kugadzirirwa kweOTA-11 kwakanangana nekugadziriswa kwetsikidzi nekusimba. Mune inotevera inovandudza, ivo vanovimbisa kuendesa iyo firmware kune idzva shanduro dzeMir uye Kubatana 8 makomba.
Chii chitsva muUbuntu Bata OTA-11
Nekusunungurwa kweiyi nyowani vhezheni yeUbuntu Kubata, epamberi magadziriso maficha akawedzerwa kune iyo-skrini keyboard, chii chinokutendera fambisa kuburikidza nemavara akanyorwa, shandura shanduko, sarudza mamaki mabhureki uye isa kana kuburitsa zvinyorwa kubva pa clipboard. Kuti uite yemaitiro epamberi, unofanirwa kubata pasi bhawa repachinzvimbo pane-skrini keyboard (zvakarongerwa kurerutsa kuiswa kwemhando yepamusoro mune ramangwana).
Iyo-pa-skrini keyboard zvakare yakawedzera sarudzo yekusarudzika yeDvorak dhizaini uye ikashandura kushandiswa kwedudziro yekugadzirisa kukanganisa nematanho akasiyana.
Bhurawuza Morph yakavakirwa-mukati (yakavakirwa pahwaro hweiyo Chromium injini uye QtWebEngine) inoshandisa modhi yekugadzirisa zvinongedzo kumatunhu ega ega. Nekuda kwekuvandudza uku, zvaive zvichikwanisika kuita mubrowser maficha senge sevha zoom level yakasarudzirwa nzvimbo, sarudza sarudzo yekuwana dhata renzvimbo padanho resaiti, tangisa zvekunze zvinoshandiswa kuburikidza ne URL zvinodzora (semuenzaniso, kana iwe ukabaya izvo "tel: //" zvinongedzo iwe unogona kufonera chinongedzo kuti ufonere), chengeta dema kana chena runyorwa rwezvirambidzwa kana zvinongobvumidzwa zviwanikwa.
Mutengi uye iyo yekuzivisa ziviso sevha haigone kuverengerwa kune account yevashandisi muUbuntu One.Kugamuchira Push notices, ikozvino chete rutsigiro mune zvinoshandiswa sevhisi ino rakakwana. Naizvo Tsigiro yeApple 7.1 zvishandiso yakagadziridzwa. Kusanganisira mamwe ma processor enzwi, ayo anodikanwa kana uchifona.
Kana iri Nexus 5, Wi-Fi neBluetooth inotonhora nyaya dzakagadziriswa, zvichikonzera mutoro usiri madikanwa pane iyo CPU uye nekukurumidza kukasira pabhatiri. Zvinetso nekutambira, kuratidza uye kugadzirisa kweMMS meseji zvakagadziriswawo.
Uyewo, inoronga kuendesa Ubuntu Kubata kuLibrem 5. Iyo yatove yakagadzirirwa nenzira yakapusa pahwaro hweyedzo prototype Librem 5 DevKit. Dzimwe nguva hunhu pachiteshi hunenge hwakaganhurirwa (semuenzaniso, hapana rutsigiro rwefoni, kuchinjisa data pamusoro penhare mbozha uye mameseji).
Mamwe ematambudziko izvo zvinoratidzika, semuenzaniso, iko kusakwanisa kupinda munzira yekurara pasina madhiraivha eApple kusvikira iyo Unity System Compositor yashandurwa kuti itsigire Wayland kuburikidza neMir, haisi yakanangana neLibrem 5 uye inotaurwazve nePinephone neRaspberry Pi.
Izvo zvakarongwa kutangazve basa pachiteshi cheLibrem 5 mushure mekugamuchira yekupedzisira mudziyo, iyo Purism yakavimbisa kutumira kutanga kwegore ra2020.
Bvunzo dzinovaka neMir 1.1, qtcontact-sqlite (kubva kuSailfish) uye iyo nyowani Kubatana 8 inoitwa mubazi rekuyedza «mucheto "vakaparadzaniswa. Shanduko inoenda kuNew Unity 8 inotungamira kumagumo ekutsigirwa kwenzvimbo dzakangwara (Makuriro) uye kusangana kweye nyowani nyowani yeiyo application launcher interface.
Munguva yemberi, kutaridzika kwekutsigirwa kunotarisirwawo yakazara-inoratidzwa kuitira nharaunda kumhanya Android zvishandiso, zvichibva pane zvakaitwa neiyo Anbox chirongwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » Ubuntu Bata OTA-11 inosvika pamwe nekuvandudzwa kweye-skrini keyboard uye nezvimwe
MX Linux 19: Iyo nyowani vhezheni yakavakirwa paDEBIAN 10 yaburitswa
Iyo nyowani vhezheni yeTor 9.0 browser yave kuwanikwa